Home Wararka Jan. Xuud “Cali Guudlaawe ma imaan karo Baledweyne, wadahadalna ma jiro”
Jan. Xuud “Cali Guudlaawe ma imaan karo Baledweyne, wadahadalna ma jiro”
Golaha Kacdoonka gobolka Hiiraan iyo Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa si isku mid ah uga jawaab celiyay hadal shalay kasoo yeeray madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, kaasoo sheegay in magaalada Baledweyne uu imaanayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe.
Hogaamiyaha Golaha Kacdoonka gobolka Hiiraan Jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa sheegay in Cali Guudlaawe uusan imaan karin Baledweyne, islamarkaana aysan jirin wax wadahadal ah oo dhexmaray Golaha Kacdoonka.
“Cali Guudlaawe iska keen Baledweyne maahan warka Dabageedna waa mid kicin dadweyne ah mana imaankaro Baledweyne isagana ma keeni karo Cali Guudlaawe, waxaan kalo cadeyneyna horayna aan u sheegay in diyaar aan u nahay in Baledweyne lagu qabto doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya” Ayuu yiri Jenaraal Abuukar Xuud.
Waxaa sidoo kale si kulul uga jawaab celiyay hadalka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo sheegay in Cali Guudlaawe uusan imaan karin Baledweyne, islamarkaana ay ogol yihiin in Baledweyne ay ka dhacdo doorashada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxaan markale ku celineyna in Cali Guudlaawe uusan Baledweyne imaan karin horayna waan u sheegnay hadana waan ku celineyna cid keeni kartana majirto, waxaana leeyahay Yuusuf Dabageed Cali Guudlaawe hadad adiga ula baxday Cali Baraf anagana waxaan ula baxnay Cali xaasid, Cali dhibaato, Cali Imtixaan, sababto ah dhibaato iyo xasidnimo asaga ka hor Hiiraan maba ka jirin, marka gobolkiisa Sh/dhexe ha ku ekaado” ayuu yiri Nabadoon Xarago oo ka mid ah Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan.
Hadaladaan kasoo kala yeeray Golaha Kacdoonka Hiiraan iyo Odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa imaanaya xili Yuusuf Dabageed uu shalay magaalada Muqdisho ka sheegay in Baledweyne uu tagi doono Cali Guudlaawe inta aysan dhicin doorashada Aqalka Hoose, waxaana hadalka Dabageed uu imaanaya xili uu dhawaan sidoo kale Baledweyne uu ka dhex sheegay in wax walba oo tabasho ah oo ay qabaan reer Hiiraan la dhameyn doono doorashada kadib, waxaana hadalkiisa shalay uu markale cirka kusii shareeyay xiisada siyaasadeed ee ka dhaxeysa Hirshabeelle iyo reer Hiiraan oo markii horaba cakirneed.